1. sano Spotify ee music 2014
2. Horumarinta iyo baahinta
3. Faa'iidooyinka iyo guulaha
4. Comments saabsan Spotify
5. Music Apple ku garaacaan kooxda Spotify
Sannaddii 2014 Spotify arkeen guul aad u weyn iyo horumarinta guud ayaa sidoo kale waxaa laga arki karaa xaqiiqada ah in dadka isticmaala ay dhegaysan kordhaya tirada kuwan raadkaygay. The daqiiqo oo ay online qaatay halka dhagaysto music dhex Spotify waa wax uu sidoo kale kor u kacay iyo waxa uu xaqiijiyey in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira iyo sidoo kale.
Marka ay timaado in horumarinta iyo ballaarinta ka dibna waa in la ogaadaa in la daah-ee Turkey iyo Greece Spotify haatan diirada ku dhowaad 23 dal ama xarumaha music ee adduunka oo dhan ayaa cabirku u xuub sare marka ay timaado 2014. abid ayaa ballaarinta weyn oo sare oo Spotify sannaddii dooda ayaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in marka la eego fanaaniinta shirkadda ayaa sidoo kale heshay magacyada qaar ka mid weyn in uu xaqiijiyey in shirkadda socdo iyo tirada sii kordhaysa ee taageerayaasha sidoo kale ka heli sare ee tirada arrintan la xiriira.
3. Faa'idooyinka iyo guulaha
Dhegaysi ayaa ah music pop ka kordhay 32% iyo salka macaamiisha Maraykanka ayaa sidoo kale ku kordheen tan iyo 25% ilaa 35% taas oo ka dhigan tahay in suuqa Maraykanka waa ballaarinta u Spotify iyo ilaa sanadkii hadda ilaa hadda ayaa sidoo kale arkay kororka baaxadda leh ee arrintan la xiriira. Sidoo kale waa mid ka mid ah adeegyada geeyo ugu fiican in uu helay abaalmarino kala duwan oo uu la xiriira iyo sidoo kale xaqiijiyey in dadka isticmaala waxaa lagu helay in tirada. Wixii 2014 astaamaha anther in la gaaray waa liiska macaamiishu 10 million music bixisay kaas oo sidoo kale waxa ay ka dhigaysaa mid ka mid ah shirkadaha music sareeya dunida iyo sidoo kale.
In la eego fannaaniin, kooxaha iyo albums sidoo kale waa in la ogaadaa in shirkaddu ay ku gaari Katy Perry, Miley Cyrus, One Direction, Lorde, Avicii iyo Taylor Swift ee sanadka 2014 kaas oo mar kale waxa ay ka dhigaysaa mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan oo ah fanaaniinta doonayaa inaan u shaqeeyo iyo gabyaan oo ay u sabab tahay macaamiisha saldhigga weyn oo uu soo helay shirkadda muddo waqtiga.
Sababo la dhigo xad-dhaaf ah oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay in la siiyey shirkadda ee isticmaala ayaa had iyo jeer lagu qiimeeyo sare Spotify oo dhan waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in dadka isticmaala ay jecel yihiin in ay dhegeystaan ​​music ku saabsan channel this ee qaba oo aan bixiyo xidhid sidoo. Liisaska dhamaystiran oo comments in user ayaa la siiyaa adeeg ilaa taariikhda waxaa laga daawan karaa URL http://spotify.en.softonic.com/comments iyo http://spotify.en.uptodown.com/comments sida Waa suurto gal ahayn inay taxaan oo dhan oo iyaga ka mid ah oo ku saabsan gabal yar oo ah qoraal.
5. Apple music ku garaacaan kooxda Spotify
Music Apple sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo adeegyada ugu horumarsan in la bilaabay inay tixgeliyaan guul suuqa shirkadaha caanka ah Spotify oo kale internet-ka. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah dhibcood in ay tahay in la tixgeliyo in arrintan la xiriira:
Lacag bil kasta
$ 9.99, £ 9.99, AU $11.99 $ 9.99, £ 9.99, AU $11.99
Haa, oo leh waxyaabo xaddidan Haa, iyadoo xayeysiis
Waqti tijaabo Free
Saddex bilood 30 maalmood
Music xayaysiiyo maktabadda size
30 million In ka badan 30 million
Haa, $14.99 bishiiba ilaa 6 users * Haa, $ 5, £ 5, AU $ 6 bil kasta halkii user dheeraad ah
Haa, Times la bixiyo Haa, Times la bixiyo
macruufka, Mac, Windows, la Apple TV iyo Android deyrtan soo socda Windows, Mac, Playstation 3 iyo ilaa, Android, macruufka, Windows Phone
Si ay sheegayaan in ay Music Apple ku garaacaan kooxda Spotify iyo qeybsanaan ku xigeenka waa wax uu leeyahay waa goor hore in la weydiiyo iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in ilaa hadda ma jirto wax jawaab kaamil ah su'aashan sida labada shirkadood ku hawlan yihiin sidii ay u tuuri ilaa hogaanka la feejignaan xad-dhaaf ah iyo hadda waxa ay kor u s si user ah si loo hubiyo in ay doortaan mid ka mid ah ugu wanaagsan.
> Resource > Spotify > Spotify Year in Music